कसरी काम सुरु गर्न Alexa कन्फिगर गर्ने | मोबाइल फोरम
कसरी काम सुरु गर्न Alexa कन्फिगर गर्ने
डेनियल टेरासा | 01/05/2022 22:55 | इन्टरनेट
एक किने पछि अमेजन इको वा समान, प्रश्न बाध्य छ: एलेक्सा कसरी कन्फिगर गर्ने? यस लोकप्रिय स्मार्ट स्पिकरलाई उठाउन र चलाउनको लागि त्यहाँ धेरै रहस्यहरू छैनन्, यद्यपि थोरै मद्दतले कहिल्यै दुख्दैन। त्यो हामी यस पोस्टमा हेर्न जाँदैछौं।
जान्नको लागि पहिलो कुरा एलेक्सा हो अमेजन द्वारा विकसित भर्चुअल सहायक। निम्न भाषाहरूमा उपलब्ध हुनुहोस्: अंग्रेजी, जर्मन, जापानी, फ्रान्सेली, इटालियन र स्पेनिश। सबैभन्दा चाखलाग्दो कुरा यो हो कि यसको माध्यमबाट तपाईले विभिन्न स्मार्ट उपकरणहरू नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ, जबसम्म तिनीहरू प्रणालीसँग उपयुक्त छन्, पक्कै पनि। यी यन्त्रहरूले प्रयोगकर्ताहरूलाई साधारण जगेडा शब्दको साथ प्रणालीलाई जगाउन अनुमति दिन्छ।
यसको आधारभूत कार्यहरू बाहेक, प्रयोगकर्ताहरूले एलेक्साको क्षमताहरू विस्तार गर्न सक्छन्। यो स्थापना गरेर प्राप्त छ कौशल वा अतिरिक्त कार्यहरू। खाडल पुरा गर्दै, कौशल तिनीहरू मोबाइल अपरेटिङ सिस्टमका एपहरू एलेक्साका हुन्।
1 Alexa के को लागि हो?
2 Amazon Alexa एप सेटअप गर्नुहोस्
3 एलेक्सासँग इको जोडा
Alexa के को लागि हो?
यो भर्चुअल सहायकसँग सुविधाहरूको साँच्चै लामो सूची छ। यसले हामीलाई प्रदान गर्ने सबै कुराको यो केवल संक्षिप्त सारांश हो:
खरिद र अर्डर गर्नुहोस्, कहिलेकाहीँ एक साधारण आवाज आदेश संग, Amazon संग Alexa को एकीकरण को लागी धन्यवाद। जब इकोमा हरियो बत्ती बल्छ, हामीले आशा गरेको प्याकेज आज आइपुग्छ। धेरै व्यावहारिक र आरामदायक।
संगीतलाई सुन, सायद सबैभन्दा राम्रो ज्ञात र प्रयोग गरिएको प्रकार्य। Alexa ले धेरै नि:शुल्क स्ट्रिमिङ सेवाहरूलाई समर्थन गर्दछ। साथै, यदि यन्त्र राम्ररी Amazon खातामा लिङ्क गरिएको छ भने, तपाइँ मिडिया र संगीत सीधा स्ट्रिम गर्न सक्नुहुन्छ।
व्यक्तिगत एजेन्डा समारोह। Alexa ले हामीलाई हाम्रो दिनको दिन व्यवस्थित गर्न, हाम्रो क्यालेन्डरहरू सिङ्क्रोनाइज गर्न, मौसम कस्तो हुनेछ भनेर घोषणा गर्न, भेटघाटहरू, भेटघाटहरू, जन्मदिनहरू, आदिका रिमाइन्डरहरू पठाउन मद्दत गर्न सक्छ।
अनुवादहरू प्रदर्शन गर्नुहोस्खैर, एलेक्सा धेरै भाषा बोल्छ।
मनोरञ्जन। त्यहाँ धेरै चीजहरू छन् जुन एलेक्साले हामीलाई मनोरन्जन गर्न गर्न सक्छ: उपाख्यानहरू र चुटकुले बताउनुहोस्, खेलहरू प्रस्ताव गर्नुहोस्, पहेलियाँहरू ...
अन्य उपयुक्त उपकरणहरू नियन्त्रण गर्नुहोस्, जस्तै साना उपकरणहरू, अधिक र धेरै धेरै।
Ver también: रमाईलो गोप्य एलेक्सा आदेशहरू
सबैभन्दा सामान्य र सामान्य अवस्थामा कसरी एलेक्सा कन्फिगर गर्ने हेरौं: अमेजन इको स्पिकर मार्फत काम गर्न: वा हामी यसलाई बक्सबाट बाहिर निकाल्छौं, यसलाई पावरमा प्लग गर्छौं र... अब के हुन्छ?
Amazon Alexa एप सेटअप गर्नुहोस्
एलेक्सा कन्फिगरेसन प्रक्रिया जारी राख्न हामीले गर्नुपर्छ हाम्रो मोबाइल फोन प्रयोग गर्नुहोस्। एउटा एप डाउनलोड हुनुपर्छ (यो एन्ड्रोइड र आईओएस दुवैमा उपलब्ध छ)। हामीले यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ:
सुरु गर्न, हामी एप स्टोरमा जान्छौं जुन हामीसँग मेल खान्छ र खोज्छौं Amazon Alexa एप.
हामी यसलाई डाउनलोड गर्छौं र हाम्रो फोनमा स्थापना गर्छौं।
जब हामी यसलाई पहिलो पटक खोल्छौं, हामीले एक घोषणा पाउँछौं जुन यो आवश्यक छ ब्लुटुथ पहुँच, हामीले थिच्नु पर्छ स्वीकार.
त्यसपछि तपाईंले नामको साथ लग इन गर्नुपर्छ हाम्रो अमेजन खाताको प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड*.
त्यसोभए तपाईंले एलेक्सामा "आफूलाई प्रस्तुत" गर्नुपर्नेछ र हाम्रो सम्पर्कहरू पहुँच गर्न र सूचनाहरू प्राप्त गर्न अनुप्रयोगलाई अनुमति दिनुपर्छ। वैकल्पिक रूपमा, हामी एक ट्यूटोरियल पहुँच गर्न सक्छौं जसले हामीलाई Alexa सँग अन्तरक्रियाको लागि आधारभूत दिशानिर्देशहरू सिकाउँछ, यद्यपि यो वास्तवमै सरल छ।
यो गरेपछि, कन्फिगरेसन पूरा हुनेछ।
(*) गृह यन्त्र खरिद गर्दा तपाईंसँग पहिले नै एउटा छ भनी मानिन्छ। त्यो हो, कम्तिमा, आदर्श।
एलेक्सासँग इको जोडा
जडानको क्षण आउँदैछ। जब हामीले इको स्पिकरलाई पावरमा प्लग गर्छौं, यो नीलो बत्ती र केही सेकेन्डपछि सुन्तला बत्तीले उज्यालो हुन्छ। अधिकांश समय, हामीले स्मार्टफोनमा डाउनलोड गरेको एपले स्वचालित रूपमा यन्त्र पत्ता लगाउँछ। यदि होइन भने, अगाडि बढ्नुहोस् म्यानुअल बन्धन यी चरणहरू अनुसरण गर्दै:
पहिले, एपमा, स्क्रिनको तल्लो दायाँ कुनामा, थिच्नुहोस् "प्लस"।
अर्को, हामी विकल्प चयन गर्दछौं "+ एउटा यन्त्र थप्नुहोस्"।
यो भयो, हामी छनौट गर्छौं "अमेजन इको" र यो विकल्प भित्र, इको, इको डट, इको प्लस र थप।
यस बिन्दुमा हामीलाई स्पिकर प्लग इन र कन्फिगरेसन मोडमा छ कि भनेर सोधिनेछ (हामीले पहिले उल्लेख गरेको सुन्तला प्रकाश)। यदि त्यसो हो भने, हामी सकारात्मक जवाफ दिनेछौं। एपले बाँकी काम गर्नेछ।
अब हामीले इकोलाई एलेक्सासँग जोडेका छौं, सबैभन्दा सहज कुरा हो हाम्रो घरको WiFi नेटवर्कमा उपकरण जडान गर्नुहोस्। Alexa ले हामीलाई अभिवादन गर्नेछ, केही आदेश सुझावहरू दिनेछ र सानो प्रशिक्षण सुरु गर्नेछ। आवाज आदेशहरूसँग परिचित हुन र यस उत्कृष्ट सहायकसँग गर्न सकिने सबै कुराहरू पत्ता लगाउन आफैलाई त्यसो गर्न प्रोत्साहित गर्नु राम्रो विचार हो।
हामी पक्का छौं कि जब तपाईले Alexa भर्चुअल सहायक पत्ता लगाउनुहुनेछ, तपाईका लागि नयाँ संसार खुल्नेछ। र तपाईं अब यो बिना बाँच्न सक्नुहुन्न।
सम्बन्धित सामग्री: एलेक्सा केको लागि हो? तिमी के गर्न सक्छाै?
लेखको पूर्ण मार्ग: मोबाइल फोरम » इन्टरनेट » कसरी काम सुरु गर्न Alexa कन्फिगर गर्ने
शायद नै कुनै पनि आयोग संग Paypal को लागि सबै भन्दा राम्रो विकल्प
कसरी PowerPoint लाई PDF मा रूपान्तरण गर्ने